I-Cherry Orchard | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba I-Cherry Orchard
I-sweet cherry i-Leningrad emnyama
Mhlawumbe, abathandi abambalwa bezithelo zalesi sihle esihle esaseningizimu bayazi ukuthi kunezinhlobo ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbalwa zama cherry amnandi emvelweni. Ngaphezu kwalokho, njalo ngonyaka lo mbhalo ukwanda. Ngakho-ke, unayo yonke ithuba lokukhetha ngokuqondile uhlobo lwe-cherry elimnandi elizokhula kahle esifundeni sakho, ucabange zonke izimo zalo zezulu nezomhlabathi.
"Diver Black" - izici eziphawuleka kakhulu ezihlukahlukene, kanye namathiphu okunakekelwa nokutshala
Lezi zinhlobonhlobo zinamagama amaningi. Ungamhlangabeza njenge "South Coast" elimnandi, kanye ne "South Coast Red", kanye ne "Bigarro Diber" (ngokuhlonipha umlimi wase-gardens owasakaza). Kodwa nokho, udumo lweCherries "iDiber Black" ngokuyinhloko luyimfanelo yezithelo zayo ezinhle kakhulu futhi ezimnandi. Sizokwazisa ngezici zayo, imithetho yokutshala nokunakekelwa.
Sijwayele ibanga le-sweet cherry elithi "Valery Chkalov"
Angazi ngawe, kodwa nginomcabango owodwa ngalesi berry esiphuzile, kunesifiso esinzima sokuzama. Kunezinhlobonhlobo eziningi ezahlukene ze-cherry elimnandi: kusuka obomvu obomvu? ku-burgundy ekhanyayo nokuphuzi. U-Cherry, oyisimenywa esihlokweni sethu namuhla, sifingqiwe njengo-Valeria phakathi kwabantu.
Iker cherry i-sweet
Ekhuluma ngezinhlobo ezinhle kakhulu ze-cherry, kubalulekile ukushayela uhlobo lwe-Iput. Ukunakekelwa okufanele kuqinisekisiwe ukusinika izithelo ezimnandi, ezihlwabusayo. Sinikeza abafundi abanentshisekelo ukuba bacabangele lezi zihlukahlukene ngemininingwane eminingi. Iput I-sweet cherry ehlukahlukene ibhekisela ezinhlobonhlobo zasebusika-eziqinile, ezinamandla ze-skoroplodny ezivunwayo ezivuthiwe kanye nezithelo zakuqala zokuvuthwa.
I-sweet cherry "i-Regina"
I-cherry izithelo zokuvuthwa ngokuvamile zivela engxenyeni yesibili kaJuni. Ngenxa yesikhala esincane salanga amajikijolo, ezinyangeni ezizayo akunakwenzeka ukuba adle izithelo zawo ezihlwabusayo. Kulesi simo, kuyojabulisa noma yikuphi izinhlobo ze-cherry "i-Regina", okuyizo izinhlobo zokuvuthwa eziseduze. Sizokwethula zonke izimfihlo zalezi zinhlobonhlobo ezimangalisayo futhi sijwayelane nemithetho yokutshala.
Cherry "Inhliziyo Yenhliziyo"
Umlimi ngamunye ufuna ukutshala ensimini yakhe kuphela izinhlobo ezinhle kakhulu zezihlahla zegadi ukuze zijabulele izitshalo eziningi futhi ezihlwabusayo. Noma kunjalo, ukunambitheka nombala wazo zonke izintandokazi zihlukile. Ngakho-ke, ukuze wandise ulwazi lwakho lama cherry, sizokwazisa ngokuhlukahluka okuvelele kwalesi sihlahla sensimu - "Inhliziyo Elishisayo".
I-sweet cherry "Revna"
Lezi zinhlobonhlobo ze-cherries elimnandi lifana kakhulu nomzali walo - i-sweet cherry "i-Pink Bryansk", kodwa kusekhona ukungezwani okuningi. Futhi uma unquma ukutshala i-cherry elihle esakhiweni sakho, kubaluleke kakhulu ukwazi yonke imininingwane mayelana nezithelo, umuthi, amahlumela, izinzuzo kanye nokungafani kwezimo ezihlukahlukene. Ngakho-ke, cabangela ngokuningiliziwe ukuhlukahluka "Revna" futhi ufunde ngezici zokutshala izithombo nezitshalo.
Phakathi kwezinhlobo eziningi ze-sweet cherry "i-Bryansk Pink" inendawo ekhethekile. Lezi zinhlobonhlobo zavela kungekudala kakhulu kwiRejista YaseRussia, kodwa ngenxa yokudla kwezithelo nokubukeka kwazo, itholakala kumasayithi amaningi amadija amateur namuhla. Sizokutshela okuningi mayelana nezici zayo nendlela yokutshala nokunakekela isihlahla.
Ama Cherries akakwazi ukuziqhayisa ngobukhulu obukhulu bezithelo zawo, njengezinye izithelo zaso zamatshe. Kodwa-ke, kukhona phakathi kwezinhlobonhlobo ezinhlobonhlobo izinhlobo ezinjalo, okufana nokuqhathaniswa kwe-intraspecific cishe ngama-giants. Phakathi kwalezi, kubalulekile ukukhumbula izinhlobonhlobo "Krupnoplodnaya" cherry elimnandi, igama elikhuluma ngokwalo.